Ogaden News Agency (ONA) – Tabaha cusub ee gumaysiga iyo dhalinyarada halganka oo heegan ugu jira
Tabaha cusub ee gumaysiga iyo dhalinyarada halganka oo heegan ugu jira
Sweden – Gumaysiga oo bilaabay qorshe raad-gadasho ah oo la doonayo inay fulinayaan kooxihii is-dhiibay oo marna loo soo xidhayo shaati diineed marka kalena shaati ah waa ONLF oo shireysa ayaa meela kala duwan lagu fashilyay. Waa fadeexadii labaad ee ku qabsata gumaysiga dalka Sweden halkaasoo ay doonayeen inay ku qabtaan waxay ugu yeedhaan shir lagu maaweeliyo gumaysi kalkaalka oo lagu niyad jabiyo shacabka halgamaya ee gudaha.
Waxaa ka horeeyay isku day kale oo 14kii isla bishan May ay koox sidanoo kale loo soo abaabulay damceen inay shirkan oo kale ah ku qabtaan Koonfur Afrika magaalada Johannesburg. Kooxdii halkaa isugu timid ayay dhalinyaro cadhaysan oon maqli karin magaca la yidhaahdo Somalida Itobiya isku xeereen goobtii ay fadhiyeen halkaasoo uu ka dhacay gacan ka hadal ku dambeeyay inay ka cararaan raashinkii ay safaaradda gumaysiga u soo dhigtay goobta. Wariyahii wakaaladda oo joogay ayaa warbixintii uu nooga soo qoray waxaa ka mid ahaa; ” .. maqaayada lagu cunteeyo ayey isugu tageen ayagoo ah 11 daba-dhilif, nasiibdaro way haleeli waayeen inay xataa cuntadii cunaan. Mid ba meel ayuu ka dhacay, waxaan bada baadiyeye police ka wadanka.” Shirkaa la doonayay in lagu qabto Johannesburg oo ku magacawnaa ONLF-tii xarootay ayaa waxaa loo soo wakiishay inay abaabulaan daba-dhilifyada kala ah Fu’aad Xidh-kayoome oo ka tagay Ingriiska iyo Cabdulaahi qamaam oo ka tagay mareykanka.
Shirkan ay isku dayeen inay ku qabsadaan magaalada Borlange ayaa isaguna ku dhamaaday fashilaad fool xun sida ay qortey shabakadda OgadenToday oo tidhi;
OT – Shir la isku dayay in lagu qabto magaalada Borlange ee wadanka Sweden ayaa ku dhamaaday fashil kadib markii ay shirkaas hor istaageen ururka OYSU iyo Jaaliyada Soomaalida Ogaadeenya ee wadanka Sweden.
Shirkan oo ujeedadu ahayd in la isugu yeedho dad kasoo jeeda Jamhuuriyada Soomaaliya iyo kuwa u dhashay Ogaadeenya ayaa waxaa sidoo kale la qorsheeyay in uu kasoo qaybgalo safiirka dawlada Ethiopia u fadhiya wadanka Sweden.
Qabanqaabiyayaasha shirkan ayaa ahaa Cabdiqaadir Cagmadhige iyo Faarax Cabdisamad oo isku dayayay inay halkaas ka yidhaahdaan hadalo lagu raali galinayo dawada Ethiopia oo ay ugu talagaleen inay dadka kaga dhaadhiciyaan in wadanku nabad yahay Ethiopiana ayna dadka laynin.
Isku daygan nabada lagaga sheekayn rabay ayaa kusoo hagaagay dhawr maalmood kadib xasuuq lagu dilay in kabadan 100 qof oo shacab ah oo ay ciidamda Ethiopia ku dileen wadanka Ogaadeenya.
Wariyaha Ogadentoday ugasoo warama wadanka Sweden ayaa xaqiijiyay in shirkaasi uusan dhicin kadib markii ay goobta tageen dhalinyar ka tirsan ururka OYSU iyo xubno jaaliyada kamid ah oo uu hogaaminayay Gudoomiyaha Jaaaliyada Ogaadeenya ee wadanka Sweden mudane Cabdinaasir Gadhwayne.
Shirkan oo ay warbaahinta u hadasha dawlada Ethiopia ku sheegeen in ay kasoo qayb galeen ilaa 500 oo qof ayaa waxaa sidii wax u dhaceen soo bandhigay ururka OYSU-Sweden oo ku baahiyay video ay ka duubeen shirkaas fashilmay bartooda ay ku leeyihiin facebook-ga.
kuwa D.qoodhiga ah waa wax aan lahayn damiir, ka sfiirka isku sheegayana wuuba ka sii liitaa,
jaaliyadda reer ogaadeeniya ee Sweden guulaysta sii giijiya